Sawirro: Faroole oo la kulmay Tedros Adhanom kuna dacweeyey DF Somalia - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Faroole oo la kulmay Tedros Adhanom kuna dacweeyey DF Somalia
Sawirro: Faroole oo la kulmay Tedros Adhanom kuna dacweeyey DF Somalia
Addis-Ababa (Caasimada Online) – Madaxwaynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Shiikh Maxamed Faroole, ayaa magaalada Addis Ababa kula shiray wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Mr.Tedros Adhanom.
Faroole iyo Adhanom ayaa ka wada hadlay xaalada Somalia, gaar ahaan Puntland oo uu shantii sano ee ugu danbeeyay soo mamulayay.
Wasiirka arrimaha dibada, ayaa Faroole uga mahad celiyay kaalintii uu ka qaaday sidii Somalia marxalada KMG-nimadda looga saari lahaa iyo hir-gelinta nidaamka federaalka, oo Soomaalida badankeed ay u arkaan caqabad cusub oo la dhex dhigay.
Faroole ayaa u sheegay wasiirka arrimaha dibedda in Somalia ay soo hagaagayso xaaladeeda, loona baahan yahay shacabku inay xili kasta isku duubni iyo wax wada qabsi muujiyaan.
Faroole, ayaa dhinaca kale DF Somalia ku hor weeraray wasiirka arrimaha dibedda Ethiopia, wuxuuna u sheegay inaysan waxba qaban, sida uu hadalka u dhigay, loogana baahan yahay Ethiopia inay arrinta wax ka qabato.
Waxa uu madaxda dowladda ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban waxa uu ugu yeeray wax ka badalka lagu sameeyay dastuurka KMG ah ee horay loogu heshiiyay iyo in laga leexday nidaamka federaalka.
Halkan ka arag sawirrada kullanka